2008 Suzuki Boulevard C109R kunye noC109RT
Iimoto neekhekhi Ukuthenga nokuthengisa
Uhlaziyo olupheleleyo: I-Suzuki Boulevard C109R ne-C109RT ka-2008
Ngenkalipho Ukwenza I-Case enkulu kakhulu
Ukuba ufuna ubungakanani bepiston ngobukhulu, i-cylinder enkulu isabela imali ingayithengi, ungaboni ngaphezu kwe-cruiser ye-Suzuki C109R ( i-$ 13,799 ) kunye ne-C109RT yokuhamba ngesikebhe (i-$ 14,999) izithuthuthu. Abafana ababi baqhayisa into yokuba i-Suzuki ithi yizona zixhobo ezinkulu kwi-injini ye-petroli, kwaye iyakwazi ukuvelisa i-torque.
I-torque yodwa ayinayo ibhayisikili elinzima, ngoko sichitha usuku egibela zombini iindidi kwiindlela eziphazamisayo ezihamba kwiqonga lase-Anza Borrego eSouth California.
Ngaba le mijelo ekhohlakeleyo eyenziwa yimihlaba yenziwe njani? Funda kwi.
Akumangalisi ukuba yonke i-Suzuki yanamhlanje ibonisa iindlela ze-DNA ye-GSX-R; izithuthuthu zezithuthi zomculo (ezibandakanya i-GSX-R1000) zenzele igama ngokwenza umsebenzi onokwethenjelwa ngelixa zineentlanga ezininzi. I-teknoloji ephuhlisiwe kwi-racetrack iye yaqhekeza phantsi kwizitrato eziqhelekileyo, kwaye i-C109R kunye ne-C109RT entsha iyamkelwa kwezi ziganeko zeGixxer.
Intliziyo yeC109 yi-1,783cc ene-liquid-cooled 54 degree-twin i-twin ikhutshwe kwi-M109R kwaye iguqulelwe umsebenzi we-cruiser. Iwele elikhulu liye lenziwe ngokunyusa i-inertia ye-flywheel, ukuqinisa i-conrods, nokuhlaziya i-camshafts kwi-torque ephantsi kunye ne-middle-range, phakathi kwezinye iinguqulelo. Inkqubo yokukhupha i-2-2 isebenzisa i-valve yefowuni kunye nokuphuculwa kwezandi, kwaye ixutywe kwi-twin enkulu i-transmission yesantya esi-5.
Ngaphambili, ama-49mm ama-Forwa ama-Showa anika i-130mm yokuhamba kwevili, kwaye ihlanganiswe kwiifom ze-chrome ze-fork. I-Showa monoshock yangasemva ixhunyiwe kwi-swingarm ye-composite almumini. Uhlobo lwe-C109RT longeza ezimbini i-saddlebags zekhanda ezincinci, umgcini-mboleki, kunye ne-windscreen ende.
Ukukhwabanisa kuqikelelwa ngokucacileyo kwibhayisiki enkulu, kunye ne-nacelle enkulu enokukhenkcelela enye, iipayipi ezinkulu ezihambayo zifaka i-bike side, kunye ne-radiator enkulu ekungabikho ukuba yenziwe idayi ye-Harleyphiles snicker.
Isondo elimva lilinganisa i-240mm ephawulekayo, kodwa awunakuze uqikelele ngoba i-fky fender ihamba phezu kweerubha.
Awuyi kuqonda ubunzima beC109 de uze ume eduze komnye, kwaye nangona kunjalo awuyi kufikelela ngokupheleleyo kuze kube yilapho ukhwele. Emva kokukhatyathwa kwesi sikhulu, unokuqala ukuqonda ubungakanani balo buninzi; Ububanzi beetanki bufuna ukuba ama- Victori angababiza njani ukuziphatha okungekho mfuneko, iiphatha ze-backbars ezikhutshulwayo zinikezela ukuqonda okulawulayo, kwaye i-ergonomic jikelele yebhayisiki yinto eqhelekileyo kuneyona M109R, efuna ukuba iingalo kunye neenyawo zisondele.
Ikhefu le-C109R likhulu kwaye likhululekile, kunye nesimo sokuhlala esiqhelekileyo senza ixesha lokuhlala likhululekile. I-Floorboards ikhululekile ngobukhulu, nangona i-boot yakho ekhohlo iya kulungelelanisa phakathi kweetekisi kunye neesithende. Nangona i-grips ihleli kude kakhulu, indawo yokugibela ngokuqhelekileyo ikhululekile kwaye ivuselela umyalelo osiweyo kodwa umyalelo.
Indlu ene-chrome ephezulu phezu kwetanki yombane iqukethe i-speedometer enkulu, kwaye ukusukela ngakwesokudla yifom ye-fuel filler, ene-chrome-plated. Kukho konke, i-C109 yi-bike ephosakeleyo kwaye igqityiwe kakuhle, nangona iinkcukacha ezifana ne-radiator ezingaphezu kwamanye amazwe kunye ne-back-fender backer fender ephazamisayo ukusuka kummandla wayo jikelele.
Endleleni: Ukukhwela i-Suzuki C109
Kwi-787 lbs eyomile, i-C109 iphakamileyo nayiphi na imilinganiselo, kwaye uya kuziva ukuba iziphumo ezinobunzima bezinto ezibangelwa ngumoya xa uphakamisa kuyo. Qalisa, kwaye inqaku elimangalisayo lokukhupha iphoyisa liphuma kwiibhobho ezimbini ze-chrome. I-C109 inokuziva ixhamle ngokuthelekiswa kunye neeHleys ezininzi, kodwa iifubliksi ezimbalwa zityhila inqaku lomdlalo wezemidlalo. I-snarl enobudlova eboleka i-C109 uphawu oluqhelekileyo, nangona ezinye iindawo zombane we-powerband zivelisa inqaku elongezelelweyo lezityalo eziqhelekileyo ezixhomekeke kwiinqwelo zokuhamba.
Emva kokuba ufumana u-C109 ukukhwelisa, okuyikwesaba kakhulu. I-torque e-Low-end is amazing, kwaye i-V yayo i-Twin idonsa ngombono wecala okhuthazayo kunye nomlutha. Ngokungafani nabaninzi abakhuphisanayo abafakela ngaphaya kwama-5,000 rpm, amandla angama-C109 angama-114 asebenza ngamahhashi atholakala kuma-5,800 rpm.
Isenzo se-Clutch silula, nangona i-shifter ingaba yinto encinci.
Emva kokuba ufumane ukuxhomekeka kwendlela ebanzi yebhayisikili, uya kufumana ukuba ukuxhomekeka ekuphendukeni kulula kunokuba ucinga, kwaye amandla okubhanka ekugqibeleni aguqulele ukujika. Cinga phambili, kwaye mhlawumbi uya kufumana i-C109 yokusingatha ukuguqulwa kwezinto ezinokwenzisayo. Akunakulungi naluphi na ulwahlulo lwengcamango, kodwa ukuphakama kwaloo ndawo kuphakama ngamasentimitha angama-28 kuyisisiseko esaneleyo ukuze umhlaba uboleke ngokusingatha kakuhle ukulinganisela kwayo.
I-Braking ixhunyiwe, isemva kwangaphambili, ithetha ukuba ukubetha amabherki angemuva kuya kusebenzisa imida, kodwa kungekhona ngokulandelanayo. I-2-piston i-275mm ehambayo kunye ne-3-piston 290mm imida yenza umsebenzi oncomekayo wokuzisa le meko.
Ihlabathi lingafuneki ukuhamba ngokukhenketha okanye ukuhamba ngokukhenketha (ngokukodwa ekubeni ukuthengiswa kwebhayisikili ezinzima kakhulu kuye kwandula ukukhawuleza), kodwa ixesha eliya kwiC109R neC109RT likukhumbuza ngokuvuyobala kwezinto ezidala, ezihamba phambili. Ngaba ezi iibhayisikili ziyaqhathaniswa ziza kutsho ku-Harley? Hayi ncma; bobabini abahlukeneyo be-C109 baziva beyiJapan ngokuqinisekileyo, ngokukodwa becinga umdla wabo ophefumlelweyo wezemidlalo.
Umqhubi onokumangalisayo, o-C109 uziphathe kakuhle ngendlela, nangona isisindo salo. Nangona i-anti-lock lock iyakongeza ukongeza, inkqubo edibeneyo isebenza kakuhle ngokwaneleyo ukuba awuyi kuphinda ungaphuthelwa yi-ABS, kwaye ekupheleni kosuku umbane webhayisikili kunye nombane ophezulu wokumangalisa ukwenza ukuba kuqhutywe ukubetha dolophu.
I-C109 iziphatha ngokubhetele kunokuba ungalindela endleleni, kwaye ukuba kukho into engekho kule mfukiselo omkhulu webhayisikili kuya kufuneka ibe yinto yokubhala. Inayo yonke into efanelekileyo yokuhamba nge-classic-ezininzi ze-chrome, ukukhanya kwe-locomotive-like-light, i-chrome exhaust piping tire, kunye ne-back rick back, kodwa ezo nkcukacha ziphazamiseke yi-radiator ebonakalayo, kwaye i-fown-good far back. Ukubonakala kwe-C109 kungenako ukwanelisa abantu abaninzi abathengi ukuba bangene kuleSuzuki enzima kakhulu, kwaye ukuba unyuselwa yintsebenzo yayo uya kufumana induduzo kwinto yokuba imbono phezu kweedathabars inkulu.
I-Hummer H2 SUT - Izixhobo kunye neenketho - Iinkonzo kunye ne-Cons
Ukuhlaziywa kwe-Yamaha V-Star ka-950 ne-V-Star ka-950 iTourer
2012 BMW K1600 GT noHlolo lwe-GTL: Hlangana ne-Boss entsha
Izinto Omele Uzazi Ngaphambi kokuba Uthenge i-ATV entsha okanye esetyenzisiweyo
2009 Ukuhlaziywa kweBMW R1200GS
Ukuhlaziywa: 2009 Moto Guzzi Griso 1200 8V
2016 Yamaha FJR1300ES kunye neFJR1300A Uvavanyo lweRide nokuHlola
Iimoto ezi-10 ezinokumelana nokukhwabanisa
2014 I-Star Star Motorcycles Bolt Review: Ngaba iNew Kid kwiBlock Beat Harley?
2009 i-Kawasaki Vulcan 900 Classic, i-Classic LT, kunye noVavanyo lwaBantu
Indlela yokufumana iiNyawo zeDancer Beautiful
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zaseMassachusetts
I-Beanie Baby Intengo Ethengisiwe: I-eBay Sales
IHarvard Law School
9 Iiplato ezinkulu kakhulu kwi "Man of Steel"
Ukuma: Ukulinda (Ngokuba)
Yiyiphi iNgxowa-mali yokuXhobisa kwiGalofu?
Prueba de ADN para tarjeta de residencia permanente e Estados Unidos
IiNkcazo zokuHlala eziPhambili
Kutheni 'iNkosi yeeNtlanzi' ivinjelwe okanye ingxaki?
Ulwimi lwesiGrike eBukhosi baseByzantine
Wedding Monsoon: Lo yiNdiya!
Kutheni i-Middle Age Abantu Abamhlophe belahla kwiiRhafu eziphezulu kunabanye?
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiikholeji ze-Nebraska zeminyaka emine
Ukuchaza i-Golf Rating 'Course Rating' kunye ne-USGA Course Rating System
I-Libra ne-Scorpio Uthando olufanelekileyo
Iseluleko sabaselula bebhola
Iintlobo zeeSeli kwiBhunga
I-20 ye-Curest Mayfield yama-20 aphezulu kakhulu
11 Amazwi ngoBeatrix Potter, uMdali wePeter Rabbit
Isigaba Inkcazo (Imicimbi)
Ukubamba ngokubanzi (ukubunjwa)
Kuyo kwaye kuYo
Imbali yeAlaska Serial Killer Israel Keyes
Yintoni iKara okanye iKakar Bangle?